Yintoni i-USB3.1 HUB? | I-Huachuang Elektroniki
Ihabhu ye-USB-C kunye ne-USB 3.1 hub
Fumana yonke into oyifunayo malunga nee-USB-C hubs kunye nee-USB 3.1 hubs apha. Yintoni umahluko? Ngaba kukho umahluko? Uhlobo lwe-C C yifomati yokunxibelelanisa eyaziswa ngo-2015. Isidibanisi soDidi A, ebesisoloko sihlala ixesha elide, siza kuthathelwa indawo luhlobo-C. Ezi iplagi zincinci kwaye zinokusetyenziswa kuwo omabini amacala - esona esona sibonelelo sikhulu. Ungaze unake indlela iplagi ekufuneka ifakwe ngayo kwizibuko - yibeka nje!
Isishwankathelo sezibonelelo ze-USB 3.1
ngokukhawuleza kabini nge-USB 3.0
I-20x ngokukhawuleza kune-USB 2.0
ezantsi ehambelana nezixhobo ze-USB 3.0 kunye ne-USB 2.0
Ukuhanjiswa kwamandla okungaphezulu (i-900 mA)-iincwadana ezinokubanjwa zingabizwa
Yintoni omele uyenze ukuba iMac okanye ilaptop entsha inesidibanisi sohlobo C lwe-USB, kodwa zonke izixhobo zokugcina zikwi-USB 2.0 okanye i-3.0? Okanye ngaba zimbalwa kakhulu iiplagi ezifakiweyo?
Isisombululo sibizwa ngokuba yi-USB-C Hub. Iihabhu ze-USB ziluhlobo olulungileyo ngokusebenzisa i-USB 3.1 port kwi-Mac eneentlobo ezindala ze-USB. Oku kulandelayo kuyasebenza apha: kukucofa intambo yehabhu kunye nokunxibelelana okuncinci kweplagi apho, ngcono ukusebenza. Iingcali ke ngoko zincoma ukuba uxhome ii-hubs ezininzi zilandelelana endaweni yokusebenzisa ihabhu ngamabala amaninzi. Uhlobo lwe-USB C 3.1 hub lwenza unxibelelwano lwezixhobo ezininzi ngoqhagamshelo lwe-USB 3.0 okanye ngaphezulu kunxibelelwano lweC-C lwendlela ye-Mac kunye nekhompyuter okanye incwadi yokubhalela. Izixhobo ezindala zinokuqhutywa kwi-hub enjalo, kodwa kuphela kwisantya kunye nesantya esenzelwe zona.
Ngaba ikhonkco le-USB-C lifanelekile kwikhompyuter yam yakudala?
Hayi - i-USB-A okanye i-USB-B (iMicro-USB) ayifakwanga kuba ifomati yahlukile ngokupheleleyo.
Ngaba isidibanisi esidala se-USB-isixhobo esifanelekileyo kwisixhobo esitsha se-USB-C?
Hayi - igalelo le-USB-C lincinci kakhulu.
Ngaba iMicro-USB kunye ne-USB-C ziyahambelana?
Hayi - iifomati zokunxibelelanisa zahlukile.
Isixhobo esidala se-USB 2.0 asinakukhawuleziswa siyisebenzisile kwisithuba samanje se-3.1 hub. Kungenxa yokuba ibrakeki sisixhobo esineempawu zonxibelelwano ezingenalo unxibelelwano olufanelekileyo ukufikelela kwiSuperSpeed ​​+ apha. Njengokutshintsha ukusuka kwi-USB ukuya kwi-USB 3.0, i-USB 3.0 ukuya kwi-USB 3.1 kusemva kuyahambelana. Kuya kuthatha ithutyana ngaphambi kokuba kumiselwe umgangatho we-USB-C osebenzisa iiMacBooks kwaye abasebenzisi banokwenza ngaphandle kweadaptha. Iyaqondakala kakhulu into yokuba izinto ezithengiweyo kwixesha elidlulileyo zisasetyenziswa.
Ii-hubs ze-C C ezikhoyo
I-HuaChuang i-USB 3.1 Uhlobo C lwe-USB Hub
Ukusuka kwi-USB 1.0 ukuya kwi-USB 3.1-ukukhula rhoqo
I-Universal seri yeBhasi (i-USB) iye yazimisa njengenqanaba lokujongana kwaye imvelaphi yayo ibuyela umgama omde ngaphambili kwitekhnoloji. Ngo-1996, inguqulelo yoqobo engu-1.0 yenza ukuba kudityaniswe inani lezixhobo, ezinje ngabashicileli, iidiski ezinzima okanye iskena, kusetyenziswa isinxibelelanisi ngaphandle kokufaka ikhadi le-plug-in ebiza kakhulu ngelo xesha okanye kufuneka uthenge izixhobo zokuphelisa. Inguqulelo yasekuqaleni inike amandla amanqanaba okudlulisela ukuya kuthi ga kwi-1.5 okanye kwi-12 MB / yesibini. Inguqulelo 2.0 enegama elithi Hi-Isantya sazisa ukuhanjiswa kwedatha kwi-60 MB / yesibini ngo-2000. Imilinganiselo ye-USB eyi-3.0, kwiminyaka esibhozo kamva, ebizwa ngokuba yiSuperSpeed ​​yokunyuka kwesantya sokudluliselwa kwi-500 MB / yesibini.
Ngaba isixhobo esitsha se-USB siyasebenza nesidala?
Into enhle kwangaphambili: Izixhobo ze-USB 2.0 nazo zonke zinokusetyenzwa kwiziseko ze-USB 3.0. Oku kuthetha ukuba, umzekelo, intonga yenkumbulo enesibuko se-USB 2.0 nayo inokusebenza kunxibelelwano lwe-USB 3.0 - nangona kunjalo, kukho iingxaki ngesidibanisi se-USB esincinci, njengoko sibanzi kwaye sinenqaku kwitheyibhile yesikhokelo. . Njengakwe-USB 2.0, i-USB 3.0 isekwe kwisantya esineyona nto inamandla. Nangona kunjalo, iziseko ze-USB 2.0 azamkeli iiplagi ze-USB 3.0- oku kungenxa yoqhakamshelwano.
Ngamafutshane, oku kuthetha:
Iintambo ze-USB 3.0 azikho mgangathweni ziyahambelana ngokubhekisele kwizixhobo zokugqibela
Iintambo ze-USB 3.0 zinokudibanisa isixhobo se-USB 3.0 kwisibambiso se-USB 2.0
Iintambo ze-USB 3.0 azinakukwazi ukuqhagamshela isixhobo se-USB 2.0 kwinginginya ye-USB
Iintambo ze-USB 3.0 azinakukwazi ukuqhagamshela isixhobo se-USB 2.0 kwinginginya ye-USB 3.0
Iintambo ze-USB 2.0 zinokudibanisa isixhobo se-USB 2.0 kumamkeli we-USB 3.0
Iintambo ze-USB 2.0 azinakukwazi ukuqhagamshela isixhobo se-USB 3.0 kwisibambiso se-USB 3.0
Iintambo ze-USB 2.0 azinakukwazi ukuqhagamshela isixhobo se-USB 3.0 kwinginginya ye-USB
Umgangatho we-USB 3.1 kunye nesixhumi esitsha sohlobo C lwe-C
Ukuhambelana, intambo kunye nepuzzle yokudibanisa - Ngoku umgangatho we-USB 3.1 kufuneka unikeze umfanekiso ocacileyo. Ngotshintsho olusuka kwi-USB 3.0 ukuya kwi-USB 3.1, intambo yoqhagamshelo entsha yaziswa kumgangatho omtsha we-USB: Uhlobo lodibaniso C luthatha indawo yohlobo A oludala kwaye inokufakwa kumacala omabini. Ikwabonelela ngesantya esiphezulu sokuhambisa. Ngoncedo lwehabhu le-USB, izixhobo ze-USB 2.0 ezisebenza ngohlobo lwesixhumi A zinokusetyenziselwa uqhagamshelo lwe-USB 3.1 ngohlobo C lokudibanisa no-C ngokuchaseneyo. Nangona kunjalo, kukho iingxaki ngombane xa udibanisa i-USB 3.0 kunye nezixhobo ezi-3.1 kwizibuko le-USB 2.0, kuba i-USB 3.0 inyuse okwangoku ukusuka kwi-500 mA ukuya kwi-900 mA. Isidibanisi se-USB-C sobudoda sisincinci kakhulu kunoluhlobo lwangaphambili A. Ukuqina kwayo kungaphezulu kwe-10.
I-Apple ithathe indawo yemo yokusebenza kweThunderbolt ngohlobo lwe-C C
Isango leThunderbolt lidityaniswe ngokudibeneyo ngu-Apple kunye ne-Intel, eyayisetyenziswa ikakhulu kwiiApple Macs, yathathelwa indawo ngo-2015 ngohlobo C lwendawo ene-USB 3.1. Ngale nxibelelaniso kuyenzeka ukuba uqhagamshele izikrini. Izigqibo zesikrini ukuya kuthi ga kwi-5k akukho ngxaki kwisinxibelelanisi. Okwangoku akukacaci nokuba uhlobo lodibaniso C olunemigangatho ye-USB 3.1 luya kuba yintambo yokutshaja esemgangathweni eYurophu. Ngo-Matshi ngo-2014, iPalamente yase-Europe yapasisa umthetho oyakuthi ubonelele ngentambo esemgangathweni yokutshaja kwezixhobo ezishukumayo ukusuka ngo-2017. Ukuza kuthi ga ngoku, isivumelwano kwimilinganiselo yokutshaja intambo ngokuzithandela - apha bonke abavelisi, ngaphandle kwe-Apple, yiyo kuphela Inkampani enentambo yokuKhanyisa engalandeli nayiphi na imigangatho kwaye ipheke isobho sayo. Ngokwayo, isixhobo sokunxibelelanisa sohlobo C lwe-USB kunye ne-USB 3.1 inethuba elihle lokuziqhelanisa nomgangatho omtsha kuba isixhumi esincinci sivumela uqhagamshelo oluncinci kwezixhobo kunye nesantya sokuhambisa siphuculwe kakhulu. Ukongeza, isiDibanisi C sokunciphisa sinciphisa i-tangle ye-USB, njengoko inokutshintsha zonke iindidi zesidibanisi se-USB zangaphambili kungekuphela ngenxa yesantya sonxibelelwano, kodwa kunye nangoku i-900 mAh.